Howdka Balanbale oo laga bilaabay Olole looga hortagayo jarista dhirta iyo dhuxusha – Radio Daljir
Howdka Balanbale oo laga bilaabay Olole looga hortagayo jarista dhirta iyo dhuxusha
Oktoobar 14, 2013 3:34 b 0
Ballanbale, October 14, 2013 – Ololaha looga hortagayey jarista dhirta ee gobolka Galguduud oo horay u socotay ayaa haatan gaaray galbeedka gobolkaas iyo deegaanka Ballanbale, maamulka ayaa soo saaray go?aamo la xiriira dhirta dhuxusha laga shito.
Maxamuud Cabdi (Istuuraaye) oo ah gudoomiye ku xigeenka Ballanbale waxaa uu sheegay in maamulku uu la dirirayo dadka dhibaatada ku haya dhirta, isla markaasna sida xad dhaafka ah u shidaya dhuxusha gobolka.
Mudane Istuuraaye ayaa cadeeyey in ay gacanta ku dhigeen labba baabuur oo xamuul ah iyo dadkii watay, kuwaas oo ay ku soo qabteen howl-gal laga sameeyey howdka degmada isla markaasna lagu baadi goobayey dadka dhuxusha shita.
Maamulka degmada ayaa ka codsaday bulshada degmada in ay lagala shaqeeyo ka hortaga jarista dhirta oo hadii ay sii socoto uu sheegay in ay dhibaato daran oo dhanka deegaanka ah ka dhalan karto.
Xoogagga Al-shabaab iyo meleteriga huwanta oo dagaal khasaare badan ku dhexmaray Ceelasha biyaha
Baahin: Axad, 13- Oct 2013 -Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdifataax Cumar Geeddi ~ Daljir ~ Galkacyo